DxOMark သည် Sony Xperia XZ3 ကိုအဆင့်နိမ့်နိမ့်ဖြင့်အမှတ်ပေးသည် Androidsis
Sony Xperia XZ3 ၏ DxOMark ရမှတ်သည်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်
အာရုန်သည် Rivas | | NOTICIAS, Sony က
၏ကင်မရာဌာန Sony Xperia XZ3 စိတ်ပျက်စရာပါပဲ၎င်းကိုယုံကြည်ရန်ခက်ခဲသော်လည်းဂျပန်ထုတ်လုပ်သူသည်စမတ်ဖုန်းများအတွက်အဆင့်မြင့်ကင်မရာမော်ဂျူးအများစုကိုထုတ်လုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
DxOMark အဖွဲ့ကဒီဖုန်းကိုကင်မရာရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အမြင်ပေးတဲ့သူကစမ်းသပ်ပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့တယ် သာ 79 မှတ်၏ဆင်းရဲသားကိုစုစုပေါင်းရမှတ်.
DxOMark သည် Sony Xperia XZ3 ကိုအလွန်နိမ့်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်
Sony Xperia XZ3 သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ပင်မစာမျက်နှာရှိသင်ရှာဖွေနိုင်သည့်ထိပ်ဆုံးကင်မရာဖုန်း ၅၀ ကိုအနိုင်ယူပြီး DxOMark ကစဉ်းစားသည်။ အလယ်အလတ်တန်းစား iPhone7နှင့် Asus Zenfone5တို့ထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည် သူထက်အများကြီးပို Huawei ကအိမ်ထောင်ဖက် 20 Pro ကို, Que ရမှတ် ၁၀၉ ဖြင့်ထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ရှိသည်.
Sony Xperia XZ3 သည်ဓာတ်ပုံဌာန၌ ၇၆ မှတ်၊ ဗီဒီယိုဌာန၌ ၈၅ မှတ်ရရှိခဲ့သည် 79 မှတ်စုစုပေါင်းရမှတ်။ ၎င်း၏အရေးအပါဆုံးအရည်အသွေးများတွင်ကောင်းမွန်သောပုံရိပ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ သာယာသောအရောင်များနှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်အလွန်ထိတွေ့ခြင်းတို့ရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, DxOMark ပြသသောအရာကိုမှ ကင်မရာအနိမ့်အလင်း၌ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ပါတယ်- အလွန်နှေးနှေးသော autofocus ရှိပြီး၎င်းသည်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရန်ဒုတိယစက္ကန့်ဝက်ခန့်ကြာမြင့်ပြီး saturation သည်အလွန်မြင့်မားသည်။ ဤသည်အသေးစိတ်နိမ့်အဆင့်ကိုနှင့်ပိုဆိုးတဲ့အဖြူချိန်ခွင်လျှာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အနိမ့်အမြင့်ပြောင်းလဲမှုအကွာအဝေးကြောင့် terminal သည်အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးရာတွင်မကောင်းပါ။ built-in bokeh mode တောင်မှမရှိ။
ဗီဒီယိုများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးနှင့်ကောင်းမွန်သောအီလက်ထရောနစ်တည်ငြိမ်မှုတို့ကြောင့်အခြေအနေအနည်းငယ်တိုးတက်သည်။ သို့သော်ရွေ့လျားမှုအကွာအဝေးနှင့်အလင်းရောင်နည်းသော autofocus သည်စိတ်ပျက်စရာကောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ရမှတ် ၇၉ မှတ်၏ရမှတ်သည်သူ့ကိုကျော်လွန်စေသည် က Xperia XA2 က Ultra.
ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအနေနှင့်၎င်းကိုသတိရသင့်သည် Sony Xperia XZ3 တွင် ၁၉ MP MP နောက်ဘက်ကင်မရာနှင့်f/ 19 aperture ပါရှိသည်အဖြစ်လေဆာ autofocus ယန္တရားနှင့်အီလက်ထရောနစ်တည်ငြိမ်။ ဗီဒီယိုများကို 4K မှ 30 fps HDR ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီး 1,080p FullHD + resolution ဖြင့် 960 fps အထိ super slow slow mode ဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Sony Xperia XZ3 ၏ DxOMark ရမှတ်သည်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်
OPPO သည်ဥရောပရှိ Reno အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်း ၅ လုံးကိုမှတ်ပုံတင်သည်
Pliq သည်သင်၏ Tetest များကိုအမူအယာများဖြင့်ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်